Strikingly: Ku soo Deji LinkedIn Meel Qurxoon, Moobil Dib Loogu Kordhiyay | Martech Zone
Arbaco, Juun 16, 2014 Axad, Janaayo 15, 2017 Douglas Karr
Badanaa waxaa jira waqtiyo aadan u baahnayn inaad kumanaan kun oo doollar ku isticmaasho goob cusub - waxaad u baahan tahay oo keliya boos-haye loogu talagalay faylalka internetka ee dhacdooyinka ah, bogga wax soo saarka fudud ama kaliya si loo muujiyo resume-kaaga internetka. Si xarago leh waxay u siisaa xalka martigelinta halkaas oo aad ka dhisi karto 3 goobo-wareega ah, oo qurux badan wax ka yar $ 100 sanadkii.
Dhab ahaan waa adeeg khadka tooska ah kaa dhigaya mid aad kuugu fudud inaad daqiiqado gudahood ku dhisto degel qurxoon, moobiil wax ku ool ah. Ganacsigaaga, mashruucaaga, ama sumcaddaada shaqsiyeed, websaydh soo jiidasho leh ayaa lagama maarmaan u ah joogitaankaaga internetka iyo sharci ahaanshaha Da'da Moobilka. Adiga oo aan lahayn koodh ama naqshad haba yaraatee, waxaad samayn kartaa degel xirfadle ah oo aad ugu muuqda taleefankaaga, kaniiniga, iyo kombuyuutarka daqiiqado gudahood!
Martech Zone Akhriste: Ku keydi 10% PROMOCODE: LAUNCH10OFF iyo hel qorshe aad u adag oo PRO ah ugu yaraan $ 18 bishii!
Dhamaan boggaga waxay adeegsadaan tifaftiraha fudud ee Strikingly halkaasoo aad ka daalacan karto dhammaan astaamahooda:
Hal muuqaal oo cajiib ah ayaa ah awooda lagu dhisi karo bartaada shaqsiyeed adiga oo si fudud ugu xiraya LinkedIn. Boggu wuxuu soo dejiyaa dhammaan macluumaadkaaga:
Waad ka faa'iideysan kartaa tifaftirehooda fudud si aad wax uga beddelaan mid ka mid ah curiyeyaasha (nooca bilaashka ah ayaa si caddaalad ah u xaddidan marka la barbar dhigo nooca la bixiyay):
Daqiiqado gudahood, waxaad leedahay degel shaqsiyeed kaas oo mudan in lala wadaago oo moobiil saaxiibtinimo leh!
Bixinta: Waxaan ku xiran nahay Dhab ahaan oo waxaan ka faa'iideysanay xiriiriyeyaasheena xiriirka la leh inta boostadan lagu jiro.
Tags: sentimitirnidaamka maamulka contentgoobta dhacdoLinkin soo dejingoobta linkedintaleefanka gacantagoobta mobiladabogga hal bog ahgoobta faylalkagoobta wax soo saarkajawaabbogga jawaabta lehsi cajiib ah